दशैँ ः टीकाको साइत पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले सार्वजनिक गरे - मनकामनापोष्ट
Written by मनकामनापोष्ट•	September 24, 2021• 11:20 am• ताजा अपडेट, धर्म/संस्कृति, बागमती प्रदेश, मनकामनापोष्ट स्पेसल
दशैँ ः टीकाको साइत पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले सार्वजनिक गरे
काठमाडौं,असोज ८ गते । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको बडाद शैँको ः टीकाको शुभसाइत बिहान १० बजेर २ दुई मिनट रहेको सार्वजनिक गरेको छ । सँगैदशैका विभिन्न साइत पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
असोज २१ गते बिहीवार बिहान ११ः४६ बजे घटस्थापनाको साइत रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा. श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । घटस्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले ११ः४६ बजेअघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नुपर्छ ।
असोज २२ गते शुक्रवार झण्डा फेर्ने साइत ११ः५६ बजे रहेको छ । पश्चिम फर्केर झण्डा फेर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिए । असोज २५ गते सोमवार पचली भैरव यात्रा गरिन्छ । असोज २६ गते मङ्गलवार फूलपाती परेको छ । फूलपाती बेलुकीको समयमा गरिने र यसको साइत आवश्यक नपर्ने अध्यक्ष प्रा. अधिकारीले बताए ।